चुनावमा एमाले र माओवादी मिल्ने सम्भावना छ- ज्ञवाली — Imandarmedia.com
१काठमाडौमा धेरै राम्रा बसहरु छन्।
२बैठक चलिरहेका बेला ‘उपेन्द्र यादव मुर्दावाद’ भन्दै आयो मानिसको एक हुल, नेताको भागाभाग
३धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष ढुंगानालाई ब्रखास्थ गर्ने तयारी, यस्तो छ आरोप
४समाजवादी र जसपाले क–कसलाई मन्त्री बनाए, यस्तो छ निर्णय
५तालिबानका नयाँ प्रधानमन्त्री अपहरण, विश्वभर तरंग
७परराष्ट्र मन्त्री खड्कालाई सर्वोच्चको झट्का, के हुन्छ मन्त्रि पद ?
८ओलीले नै राष्ट्रपति भण्डारीमाथि ठड्याए यस्तो गम्भीर प्रश्न, शीतलनिवासमा खैलाबैला
९राष्ट्रपतिमाथि अण्डा प्रहार, के छ अबस्था ?
१०संसारकै धनी एलन मस्क प्रेमिकासँग छुट्टिए
११आलुको बोक्रा फाल्नेले यो पढ्नैपर्छ, अनि पो थाहा हुन्छ खास कुरा
१२मध्यरातमा प्रचण्डलाई देउवाको फोन, के के भयो कुराकानी ?
काठमाडौँ। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीले नेकपा एमाले एकतावद्ध भइसकेपछि अरु वामपन्थी पार्टीसँग एकता हुने बताएका छन्। एमाले मिलिसकेपछि आगामी चुनावसम्म एमाले र माओवादीका बीचमा एकता हुन सक्ने ज्ञवालीको विश्वास छ। रातोपाटीसँगको भिडियो अन्तरवार्तामा हामीले ज्ञवालीलाई सोध्यौं एमालेसँग विगतमा एक भएको माओवादी अहिले काँग्रेससँग गएको छ। आगामी चुनावसम्म फेरि माओवादीसँग एकताको सम्भावना कति छ ?
जवाफमा एमाले उपाध्यक्ष ज्ञवालीले भने, संसारमा असम्भव भन्ने कुनै चिज छैन । बाटो एउटै, उद्देश्य एउटै भएपछि तपाई अलग पार्टी र चुलाचौका गरेर किन बस्नुहुन्छ? परिस्थितिले मिलाउनेतिर लान्छ । चुनावमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ भने फेरि वामपन्थीहरु किन मिलेर जान सकिँदैन? त्यो सम्भावना देख्छु ।
एमाले एक हुँदा अरु पार्टीले डराउन आवश्यक नरहेको ज्ञवालीले बताए । उनले भने, नेकपा एमाले एकतावद्ध भयो भने अरु पार्टीहरू डराउनुपर्ने आवश्यकता छैन। नेपाली काँग्रेसलाई म के भन्छु भने वामपन्थी पार्टीहरू आफ्नै कमजोरीले फुटिरहेका छन्, अनि योभन्दा बढी एमाले पनि फुट्नैपर्छ भनेर तपाईहरु नठान्नोस्।
माधव नेपाल समूहका नेता ज्ञवालीसँग हामीले एमाले विवादको अन्तर्यमा प्रवेश गरेर लामो कुराकानी गरेका छौं । एमाले विवादको मिलनबिन्दु के हो र आगामी महाधिवेशनमा को अध्यक्ष बन्ला भन्ने प्रश्नमा समेत हामीले ज्ञवालीको विश्लेषण सुन्यौं। आगामी महाधिवेशनमा केपी ओली र माधव नेपालकै बीचमा पनि प्रतिस्पर्धा हुने सम्भावनालाई ज्ञवालीले अस्वीकार गरेनन्।
मन्त्रिपरिषद बैठकले एकाएक किन गर्यो यस्ता निर्णय, देशैभर तरंग
साढे दुई महिनापछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुँदै
देउवाका ज्योतिषले गरे अर्को भविश्यवाणी, प्रचण्ड तनावमा
एमाले उपाध्यक्ष सहित ३५० जना माओवादीमा प्रवेश, ओलीलाई खाना रुच्नु छोड्यो
एमाले बैठकमा रडाको, ओलीलाई तह लगाउन तेस्रो धारका नेताहरुले गरे यस्तो बोल्ड निर्णय
एमालेमा भीम रावल र केपी ओली वार कि पारको स्थितिमा, अरु नेतापनि साथ् छोड्दै
चीनसँग युद्ध गर्न किन डराउँछ अमेरिका ? यस्तो छ रहस्य
मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिन किन चाहँदैनन् प्रधानमन्त्री देउवा ?